Facebook မှာ Trusted Contacts များကို ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ ? – DigitalTimes
HOW TO Softwares & Application
Facebook ဟာ သင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနဲ့ အမှတ်တရများကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့် Facebook အကောင့်ကို အခြားလူများ ခိုးယူလို့ မရအောင် ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ သင့် အကောင့်ကို Password တစ်ခုထဲဖြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းက စိတ်မချရပါဘူး။ အခြား လုံခြုံရေးများဖြင့်လည်း ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။
Trusted Contacts ဆိုတာ
Trusted Contacts ဟာ သင့် အကောင့် Lock ကျသွားခြင်း၊ ဟက်ခံရခြင်း စတဲ့ အခြေအနေမှာ အကူအညီတောင်းခံနိုင်ဖို့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့ Facebook ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့် Lock ကျသွားရင် အဲဒီ သူငယ်ချင်းများက သင့် အကောင့်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Trusted Contacts အဖြစ် သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်အထိ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Facebook မှာ Trusted Contacts များကို သတ်မှတ်နည်း
၁။ သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲကို Login ၀င်ပါ။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ Drop-Down Arrow ကို နှိပ်ပါ။
၂။ Settings> Security ထဲသွားပါ။
၃။ Your Trusted Contacts ရဲ့ ညာဘက်မှ Edit ကို နှိပ်ပါ။ Choose Friends ကို နှိပ်ပြီး အနည်းဆုံး သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ သူငယ်ချင်းများရဲ့ အမည်ကို Name Box မှာ စာရိုက်၍ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများကို ရွေးချယ်ပြီးရင် Confirm ကို နှိပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် သင့်သူငယ်ချင်းများရဲ့ ပရိုဖိုင်ပုံများ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် အကောင့် Lock ကျသွားရင် Facebook က သင့်သူငယ်ချင်းများထံ ကုဒ်ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကုဒ်ဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ပြန်ဆယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ref : tech-recipes
Facebook မှာ Trusted Contacts မြားကို ဘယျလို သတျမှတျမလဲ ?
Facebook ဟာ သငျ့ရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြား၊ ဓါတျပုံမြား၊ ဗီဒီယိုမြားနဲ့ အမှတျတရမြားကို သိမျးဆညျးထားတဲ့ နရော ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ သငျ့ Facebook အကောငျ့ကို အခွားလူမြား ခိုးယူလို့ မရအောငျ ကာကှယျထားသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ အကောငျ့ကို Password တဈခုထဲဖွငျ့ ကာကှယျထားခွငျးက စိတျမခရြပါဘူး။ အခွား လုံခွုံရေးမြားဖွငျ့လညျး ကာကှယျထားသငျ့ပါတယျ။
Trusted Contacts ဟာ သငျ့ အကောငျ့ Lock ကသြှားခွငျး၊ ဟကျခံရခွငျး စတဲ့ အခွအေနမှော အကူအညီတောငျးခံနိုငျဖို့ စိတျခယြုံကွညျရတဲ့ သူငယျခငျြးမြားကို ကွိုတငျ သတျမှတျထားနိုငျတဲ့ Facebook ရဲ့ စှမျးဆောငျခကျြ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အကောငျ့ Lock ကသြှားရငျ အဲဒီ သူငယျခငျြးမြားက သငျ့ အကောငျ့ကို ပွနျလညျ အသုံးပွုနိုငျအောငျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ Trusted Contacts အဖွဈ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျကနေ ၅ ယောကျအထိ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
Facebook မှာ Trusted Contacts မြားကို သတျမှတျနညျး
၁။ သငျ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့ထဲကို Login ဝငျပါ။ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှ Drop-Down Arrow ကို နှိပျပါ။
၂။ Settings> Security ထဲသှားပါ။
၃။ Your Trusted Contacts ရဲ့ ညာဘကျမှ Edit ကို နှိပျပါ။ Choose Friends ကို နှိပျပွီး အနညျးဆုံး သူငယျခငျြး သုံးယောကျကို ရှေးခယျြပေးပါ။ သူငယျခငျြးမြားရဲ့ အမညျကို Name Box မှာ စာရိုကျ၍ ရှာဖှနေိုငျပါတယျ။ သူငယျခငျြးမြားကို ရှေးခယျြပွီးရငျ Confirm ကို နှိပျပေးပါ။
ဒါဆိုရငျ သငျ့သူငယျခငျြးမြားရဲ့ ပရိုဖိုငျပုံမြား ပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ အကောငျ့ Lock ကသြှားရငျ Facebook က သငျ့သူငယျခငျြးမြားထံ ကုဒျပေးပို့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ ကုဒျဖွငျ့ သငျ့အကောငျ့ကို ပွနျဆယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။